Our Education | Ahkeno's Blog
December 9, 2009 ~ ahkeno
Conservation class မှာဆွေးနွေးတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပါ။ ခေါင်းစဉ်က Did you think University Degree is Essential for everyone? ပါ။ တက္ကသိုလ်တခုခုရဲ့ဘွဲ့ဟာ အားလုံးအတွက်လိုအပ်ပါသလားပေါ့။ ပထမဆုံး အကီနို အမြင်ကို မပြောခင် အကီနို Partner ပြောတဲ့ idea လေးကိုအရင် share လုပ်ချင်ပါတယ်။သူကတော့ အဝေးသင်ပထမနှစ်ကျောင်းသူလေးပါ။
“တက္ကသိုလ်တခုခုရဲ့ ဘွဲ့ဟာ မလိုအပ်ပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပိုက်ဆံပေးနိုင်ရင် ပညာရပ်တိုင်းကို အပြင်မှာတတ်နိုင်ပါတယ် နောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကရတဲ့ဘွဲ့ကို ဘယ်တိုင်းပြည်မှ အသိအမှတ်မပြုပါဘူး နောက်ပြီးကျောင်းတွေကလဲဝေးလွန်းတော့ မတတ်တာပဲကောင်းပါတယ်”
တဲ့။သူ့စကားဆုံးတဲ့အထိအကီနိုဘာမှမပြောသေးပဲ အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုမှ အကီနိုစပြောပါတယ်။ အကီနိုက ငြင်းခုန်ရင်းပြောတဲ့ပုံစံမျိုး မဖြစ်စေချင်ပဲ နားလည်သဘော ပေါက်အောင်ဆွေးနွေးတဲ့သဘောနဲ့ပဲပြောခဲ့ပါတယ်။
“အမ တွေ့ကြုံဖြတ်သန်းလာတဲ့ အမြင်ရတော့ ဘွဲ့တဘွဲ့ဟာ လူတိုင်းအတွက်လိုအပ်တယ် ။ အမ ဖိုရမ်တခုထဲမှာဖတ်ဖူးတယ် ဆယ်တန်းအောင်တဲ့ အလုပ်သမားရှိနိုင်ပေမဲ့ ဆယ်တန်းအောင်တဲ့ မန်နေဂျာဆိုတာတေ့ာလက်ခံဖို့ခဲယဉ်းသွားပြီ ။နောက်ပြီး ပညာရပ်အားလုံးတိုင်းကို ငွေပေးရင်သင်ကြားနိုင်တယ် ဆိုတာမှန်ပေမဲ့ အပြင်မှာ သိန်းချီသောင်းချီနေတဲ့ ပညာရပ်တွေကို အမတို့မြန်မာပြည်မှာပဲ ကျောင်းလခ ထောင်ကျော်ယုံလေးနဲ့ရနိုင်တယ် (ကိုယ်ခံယူဆည်းပူးတတ်ရင်ပေါ့)၊နောက်ပြီး ညီမလေးပြောတဲ့ အမတို့တိုင်းပြည်က ပညာရေးဘွဲ့ကို ဘယ်တိုင်းပြည်မှလက်မခံဘူးဆိုတာကိုတော အမလုံးဝငြင်းပါတယ် အမတို့နိုင်ငံက ရတဲ့ဘွဲ့နဲ့ တခြားနိုင်ငံမှာ ပညာရှာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့ ပညာရှင်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်“။
အကီနိုနဲ့ပဲပြိုင်မငြင်းချင်တာကြောင့်လားစိတ်မ၀င်စားတာကြောင့်ပဲလား မသိပါဘူး ဆွေးနွေးပွဲက ဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်တည့်သွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အကီနိုစိတ်ထဲမှာ တမျိုးကြီးနဲ့ ခိုးလိုးခုလုဖြစ်နေတာကြောင့် ဒီပိုစ်လေးကိုရေးလိုက်တာပါ။အခုခေတ်ပညာရေးစနစ်မှာ လူငယ်တွေရင်ထဲစွဲနေတာက တက္ကသိုလ်ပညာရေးဟာ အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး အချိန်တန် နိုင်ငံခြားထွက်မှာပဲ ဒီမှာသင်တန်းတတ်ရုံနဲ့ လုံလောက်တယ်ဆိုတာပဲ။တကယ်တော့ ပညာရပ်ဆိုတာ ပါမောက္ခကြီးဆီမှာသင်မှ သင်တန်းကြီးမှာ ပိုက်ဆံများများပေးပြီးတတ်မှ ပညာရတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်လက်ခံရင် လက်ခံနိုင်သလို ကိုယ်ပညာယူရင် ယူသလို ရနိုင်ပါတယ်။ အကီနိုရဲ့ တက္ကသိုလ်သက်တန်းမှာ အကီနိုတက်ခဲ့တဲ့ ကျုရှင်ဆိုတာ လက်ချိုးပြီးရေနိုင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ အချင်းချင်းရှင်းပြရင်း စာသင်ကောင်းလွန်းတဲ့ ဆရာ ဆရာမချိန်တွေကိုလိုက်တတ်ရင်းနဲ့ ပညာရှာဖွေခဲ့တာပါ။ အခု အကီနို အလုပ်မှာ အသုံးချနေတဲ့ ပညာရပ်တွေဟာ အကီနိုတို့ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ကသင်ပေးလိုက်တဲ့ ပညာရပ်တွေပါ။နောက်ပြီး အခုဖြစ်နေတဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ စာဖတ်နည်းပါ။ စာတွေကို လက်တန်းကျက် စပေါ့ရိုက် မေးခွန်းအောက်နဲ့ အောင်လာခဲ့တော့ ဘယ်အလုပ်ရှင် ဘယ်နိုင်ငံကလက်ခံမလဲ။ တကယ်တန်း တတ်သိ နားလည်ပြီး ရလာခဲ့တဲ့ ပညာရပ်သာဆို လူအဆင့်အတန်းလဲ ကြည့်စရာမလိုဘူး တိုင်းပြည်အခြေအနေလဲကြည့်စရာမလိုပဲ ကိုယ့်ပညာအရည်အချင်းနဲ့တင် အလုပ်ရနိုင်ပါတယ်။စာကို စာမေးပွဲအောင်ရုံ အတိုင်းအတာတခုအတွက်ပဲ အသေမကျက်ပဲနဲ့ အကြောင်းအရာတခု ခေါင်းစဉ်တခုကို အရင်ဆုံးဘာကိုဆိုလိုတယ် ဆိုတာသိအောင် အရင်ဖတ်ကြည့်ပါ ပြီးမှတဆင့်ချင်းဆီ ဖတ်သွားပါ( ကျက်စရာမလိုသေးပါဘူး) အားလုံးတခေါက်ဖတ်ပြီးရင် အဲဒီအကြောင်းအရာတွေထဲက ကိုယ်မှတ်မိခဲ့တာ အရေးကြီးတဲ့ ဆိုလိုချက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေကို စာရွက် အကြမ်းတခုမှာ ချရေး ပြီး နောက်တခေါက်ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ အသေကျက်စရာမလိုပဲ ဒီခေါင်းစဉ် ဒီအကြောင်းအရာကိုမြင်ရင် ဘာကိုဖြေရမယ် ဆိုတာ ခေါင်းထဲစွဲသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကတော့ အကီနို ကျက်ခဲ့တဲ့ စာကျက်နည်းလေးပါ။ တခုရှိတာက ကိုယ်ဖတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို ပြန်ပြန်ဖတ်ပေးနွေးပေးဖို့တော့လိုပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ကပေးခဲ့တဲ့ ပညာရပ်တွေဟာစာတွေ့များတာကြောင့် သက်ဆိုင်ရာဘာသာအရပ်လိုက် အပြင်မှာလဲ ထပ်မှန်ဆည်းပူးဖို့လိုပါသေးတယ်။ ကိုယ်တိုင်မကြိုးစားကြည့်ပဲတော့ ခေတ်တခေတ်ရဲ့ လက်သုံးစကားလိုမျိုး ဟိုဟာပေါ် အပြစ်တင် ဒီဟာပေါ်အပြစ်တင်နေမဲ့ အစား ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြည့်တွေကြုံပြီးမှ ရလာတဲ့ ရလာဒ်တခု အပေါ်မြည်းစမ်းကြည့်စေချင်ပါတယ်။
< Previous လောကအတွက်
Next > ကလေးတယောက်ရဲ့ ရှင်သန်ရာ
3 thoughts on “Our Education”
nice blog. sister. it will be better if u can putacbox 🙂
ဟိုဟာပေါ် အပြစ်တင် ဒီဟာပေါ်အပြစ်တင်နေမဲ့ အစား ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြည့်တွေကြုံပြီးမှ ရလာတဲ့ ရလာဒ်တခု အပေါ်မြည်းစမ်းကြည့်စေချင်ပါတယ်။